काठमाडौं, १६ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिक्रिया थियो, ‘नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौति छ ।’ सत्तारुढ दलकै अध्यक्षले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेपछि नेकपाभित्रको अवस्थाबारे मानिसहरुले लख काटेका थिए ।
प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमलाई नराम्रो त भनेनन् तर, कार्यान्वयनको चुनौती देखाउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भनेका थिए, ‘चुनौति चाहिं कार्यान्वयनकै छ । मलाई लाग्छ यो कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले रामै्र गति लिन्छ ।’
यहीबीद्वमा प्रचण्ड राष्ट्रपति निवास पुगे । उनले त्यहाँ लामै समय बिताए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शितल निवासमा लामै कुरा गरेपछि प्रचण्डले बजेटको भने प्रसंशा गरेका छन् ।
उनले बजेट प्रगतिशील र जनपक्षीय भएको प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘कोराना महामारीको यो विषम परिस्थितिमा पनि सन्तुलित, जनतालाई राहत दिने किसिमले सिर्जनात्मक, प्रगतिशील, जनपक्षीय ढंगले समाजवादउन्मुख बाटो पक्रिने बजेट आयो, म खुसी छु ।’
उनले बजेटले सबै समुदाय, त्यसमा पनि निम्नवर्गका जनतालाई सम्बोधन गर्ने र राहत दिनेगरी आएको बताए । अझ अगाडि बढेर उनले आन्तरिक र बाह्य ऋण सहयोग र अनुदान पनि वस्तुवादी भएको प्रतिक्रिया दिए ।
प्रचण्डको फेरिएको बोलीलाई कतिपयले राष्ट्रपतिसँगको भेटपछिको परिवर्तनको रुपमा औंल्याउन थालेका छन् । भेटमा के कुरा भयो ? खुल्न सकेको छैन । प्रचण्ड निकट एक नेतासँग बुझ्दा उनले देशमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, नेकपाको आन्तरिक अवस्था र राष्ट्रिय राजनीतिका केही महत्वपूर्ण कार्यभार सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा उक्त भेट केन्द्रित भएको बताए । तर, त्यो कार्यभार के हो भन्नेबारेमा पनि उनले पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे ।
यसैबीच सीमा विवाद बढेको भारतले वार्तामा ध्यान नदिइरहेको बेला चीनले पनि उच्च स्तरमा वार्ता गर्न चाहेको सन्देश पठाएको छ । चीनले नेकपाका अध्यक्षहरुसँगै कुरा गर्न चाहेको बताइएको छ । आगामी हप्ता-१० दिनभित्रै भिडियो कन्फरेन्समार्फत् हुने वार्तामा चीनका विदेश विभाग प्रमुख सोङ्ग ताओ सहभागी हुनेछन् । उनले नेपालको उच्च स्तरका नेतासङ्ग दुई घण्टा लामो छलफल गर्नेछन् ।